Dhisid - Wikipedia
Mashruuc dhisme weyn; dabaqan waxaa laga dhisayaa Melbourne, Australia.
Dhisid (; ) waa habka iyo nidaamka lagu dhiso dhisme ama dhismeyaal badan kuwaasi oo qaradooda iyo weynidoodu kala weyn tahay. Sida caadiga ah, dhisidu way ka duwan tahay wax samaynta, sababtoo ah waxaa nidaamka dhisidu leeday wado u gaar ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhisid&oldid=168996"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Juun 2017, marka ee eheed 10:48.